Burton House (eMazantsi edolophu Winona) - I-Airbnb
Burton House (eMazantsi edolophu Winona)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAmber
Indlu yaseBurton likhaya elisanda kulungiswa, elipholileyo elincinane elikwiibhloko ezimbalwa ukusuka edolophini iWinona, MN kunye noMlambo omkhulu iMississippi. Kukuhambo lokuya kwiindawo zokutyela ezininzi, iibhari kunye neevenkile. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphehlelelwa kwabathanda bangaphandle, enamathuba amahle olonwabo ngaphakathi nakwiWinona.
Nangona iBurton House yakhiwa ngo-1885, iye yahlaziywa ngokupheleleyo nangothando. Besizimisele ukubuyisela izinto zakudala endlini, ngoko ke ayizange iphulukane nomtsalane wayo. Uya kufumana igumbi lethu lokulala elinye, indlu yokuhlambela enye ivakala ivulekile kwaye ivulekile. Inekhitshi eligcwele ngokupheleleyo, elinesilingi entle evalekileyo kunye nendawo yokuhlamba impahla kwigumbi lokuhlambela. Kukho i-Wifi kunye ne-Smart TV ekuvumela ukuba usasaze kuyo nayiphi na i-app onokuthi ube nayo umrhumo wakho. (okt. Netflix, Amazon Prime, Hulu etc.) Kukho i-propane grill emva kwendlu kunye neendawo ezimbini zokupaka ezitalatweni emva kwendlu.
Iyadi engasemva - Ayibiyelwanga yonke
5.0 out of 5 stars from 108 reviews
5.0 · Izimvo eziyi-108
Ekufuphi nekomkhulu leWatkins kunye neMyuziyam kunye neMyuziyam yasePoland. Iibhloko ezimbalwa ukusuka kwidolophu yaseWinona kunye noMlambo iMississippi. Kungaphantsi kweemayile ukusuka kwiWinona State, kumachibi eWinona kunye neLevee Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Amber
I was born and raised in Minnesota. I am an educator, wife and mom to three adventurous boys. Our family loves to travel and explore new places.
Kukho ibhokisi yokutshixa yezitshixo, evumela iindwendwe ukuba zihlole ngokuzimeleyo. Sifuna ukuba ube nendawo kunye nemfihlo ngexesha lokuhlala kwakho. Thumela nje umyalezo, ufowunele okanye uthumele umyalezo ngo-Airbnb ukuba kukho nantoni na enokuvela. Sihlala kumganyana nje osuka eBurton House kwaye siya kufumaneka ukuba siyafuneka.
Kukho ibhokisi yokutshixa yezitshixo, evumela iindwendwe ukuba zihlole ngokuzimeleyo. Sifuna ukuba ube nendawo kunye nemfihlo ngexesha lokuhlala kwakho. Thumela nje umyalezo, ufowu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Winona